Indlela engcono kakhulu yokususa imikhaza enjeni (futhi ezimbi kakhulu futhi) | Izinja Umhlaba
Ungayisusa kanjani imikhaza enjeni
Ukususa imikhaza enjeni kungaphenduka iphupho elibi. Ngaphezu kwanoma yini ngoba la ma-parasites adlulisa izifo ezahlukahlukene ngakho-ke kufanele sithathe isinyathelo ngokushesha okukhulu. Kokubili impilo yesilwane sethu kanye neyethu. Njengoba kufanele sibavimbe ekuxhumeni nasekulumeni, ngoba njengoba wazi, badla egazini lethu elinoboya.
Ngakho-ke kwesinye isikhathi lokho esikufunayo noma esingakufuni kuyenzeka. Lokho esingakwenza kuphela vimbela ngezindlela zasekhaya, ngochungechunge lwamathiphu esikushiya namhlanje futhi-ke, ngeminye imibono eminingi ukuze ukususa imikhaza enjeni kusheshe kakhulu futhi kusebenze ngokwengeziwe, nokuyilokho kanye esikudingayo.
1 Indlela engcono kakhulu yokususa imikhaza enjeni
2 Ungawususa kanjani umkhaza ngezifinyela
3 Izindlela zasekhaya zokususa imikhaza engasebenzi kahle
3.1 Amafutha omnqumo
3.3 Faka amakhaza noma ukushisa
3.4 Isuse ngeminwe yakho
4 Amathiphu wokuvimbela inja yakho ekubambeni imikhaza
4.1 Amakhola noma amapayipi
4.2 Bheka izinwele zakhe njalo
4.3 Gwema izindawo ezinokhula olunzima noma izitshalo ezinde
Indlela engcono kakhulu yokususa imikhaza enjeni
Kafeiya Herramientas para...
Isethi yama-tweezers ka-Chanurae...
Indlela enhle kunazo zonke okufanele sisuse imikhaza ukusebenzisa udlawana olukhethekile lwabo. Yebo, kungumkhiqizo owenzelwe ukuwasusa ngendlela enethezeke nangokunemba ngokwengeziwe. Lolu hlobo lwesitsha lungaba nokuqedwa okumbalwa, kokubili ngephuzu elihle kakhulu noma uhlobo lwehhuku. Ngoba akuyona yonke imikhaza efanayo, mincane kakhulu ngosayizi eminye emikhulu kakhulu. Kepha qaphela, ngoba ngaphezu kobukhulu bezinambuzane, lezi zibopho zizophinde zihambisane nesikhathi lapho imikhaza isinamathele esikhunjeni sesilwane. Ngoba kwesinye isikhathi kunzima kakhulu ukuzisusa. Kukho konke lokhu, siyabona ukuthi ukuphela kokuqina kwezibopho kungahluka kanjani.
Kepha kubo bonke, kuvame kakhulu ukukhuluma ngalabo dlawana abanezingwegwe ezimbili nohlobo lokusikwa. Ngoba yibo abazosisiza enkingeni yethu yanamuhla. Kumele siyisondeze kakhulu esikhumbeni senja bese siyislayida size sikwazi ukubamba ikhanda lomkhaza.
Lapho sinayo, kufanele simane sinikeze ukujika okuncane nokudonsa siye phezulu ukuze sikuhlukanise nomzimba wesilwane sethu.
Ungawususa kanjani umkhaza ngezifinyela
Uma ungenawo udlawana oluthile, kuyiqiniso ukuthi ama-tweezers nawo azokwenza umsebenzi esiwudingayo. Ikakhulukazi lezo eziphela ngephuzu. Manje sesifuna umkhaza, wehlukanisa izinwele zesilwane. Kumele kukhunjulwe ukuthi imikhaza inomzimba omkhulu ngokwanele uma iqhathaniswa nenhloko futhi okufanele sikususe ngempela yilokhu. Ngoba kwesinye isikhathi uma singenzi kahle, singahlukanisa umzimba futhi senze ikhanda lihlale ngaphakathi kwesikhumba sezinja zethu.
Manje isikhathi sokuba beka ama-forceps asondele futhi asondele esikhunjeni ngangokunokwenzeka, uzama ukubamba ikhanda le-parasite. Uma unayo, kuzodingeka ukuthi unyuse phezulu kodwa ungabuyeli emuva, njengoba abantu abaningi bekholelwa ngoba ingaphuka. Udinga lokhu kuhamba ukuze ube nengcindezi ethile, ngoba ngale ndlela, kuzoba umkhaza okhishwa ngenxa yokwesaba ukwephuka. Kulokhu, awudingi ukuvula izibopho, vele uzidonse ngokuqinile, njengoba sishilo.
Izindlela zasekhaya zokususa imikhaza engasebenzi kahle
Amafutha omnqumo kungenye yamakhambi noma izindlela zasekhaya ngezinhloso eziningi. Kulokhu kubuye kukhulunywe kakhulu ngaye. Ngoba uma sibeka amaconsi ambalwa emthini, izominyana bese iphendula lowo mzuzu, izokhombisa ikhanda layo lokho okudingeka sikususe. Uzobe uthela amaconsi futhi ulinde wena ukuthi usisuse ngezidladla.
Okwenzekayo ukuthi yize umkhaza ukhishwa, uzobe ekwenzile lokho ngokubuyisa izinto manje ezidlulela emzimbeni wesilwane, ezingadala izifo kanye nokutheleleka uma umkhaza uthelelekile.
Isetshenziswa njengesibulala-magciwane sendawo lapho umkhaza wawukhona. Kepha qaphela, amaconsi nje ambalwa ukuze isikhumba senja yethu sihlale singenazifo. Kuyiqiniso ukuthi isetshenziswa futhi ngokuhlanganiswa namafutha omnqumo. Ngoba lokhu, njengoba sishilo, kuzominzisa umkhaza futhi, futhi kuzowushelela kangcono ukuze ubususe, ngenkathi utshwala buzokwenza inhlanzeko nokunakekela inja yethu. Kepha kungaba ngumsebenzi omude kakhulu kunalokho obekulindelekile.
Faka amakhaza noma ukushisa
Esinye sezixazululo ezaziwa kakhulu ukususa imikhaza ngokusebenzisa ukushisa namakhaza. Ngakolunye uhlangothi, kuyingozi ukuletha umthombo wokushisa esikhunjeni sesilwane sethu. Njengoba noma yiluphi uhlobo lokunyakaza singazisola ngomonakalo omkhulu. Kepha kungenxa yomunye, kokubili ukubanda okukhulu nokushisa kuzokwenza umkhaza unamathele kakhulu esikhunjeni ukugwema imithombo enjalo. Lokhu kusenza sikubone kunamathiselwe kakhulu futhi kungawenza ube nzima umsebenzi wethu.
Isuse ngeminwe yakho
Kukangaki usizwile noma usibonile? Ukususa imikhaza enjeni ngeminwe yakho kungenye inqubo ethandwayo. Akukho okungaba kude neqiniso. Njengoba kulokhu, i Ukubathinta ngezandla zakho kungadala ukuthi basilume futhi ngenxa yalokho kusidlulisele izifo ezithile, ngoba ukuluma akubangeli ubuhlungu futhi besingeke sikuthole. Ngaphezu kokuthi siwela ephutheni lokuthi uma ulisusa, umlando wokungalibambi ikhanda uyaphindwa nokuthi uhlala emzimbeni wesilwane. Ngakho-ke, noma ngabe ubheka kuphi, le nqubo ayinconyiwe.
Amathiphu wokuvimbela inja yakho ekubambeni imikhaza
Amakhola noma amapayipi
Njengoba sazi kahle, imigexo ilungile ukugwema lolu hlobo lwenkinga. Uma isivele ikhona, iyayifushanisa futhi uma kungenjalo, ivimbela ukubonga ngesenzo sayo. Kodwa kungcono ukubonisana nodokotela wezilwane ukuze uthole okufanela isilwane sakho kangcono. Kufanele ubeke amapayipi emhlane wabo, endaweni lapho bengeke bakhothwe khona futhi ngalokhu uzoba nokuvikela okungaphezu kwenyanga emikhikheni.
Bheka izinwele zakhe njalo
Yenzelwe zonke izinja kepha ikakhulukazi lezo ezinezinwele ezinde. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi lapho uphuma khona ungayithatha futhi uyihlole, ngokwesibonelo, ukuxubha izinwele okuhle. Vele, uma lapho sihlola sithola umkhaza, khona-ke kufanele sikususe ngokushesha. Usuvele uyazi ukuthi ngokushesha kuba ngcono, ukunamathela kodwa futhi nokugwema izinkinga zakamuva. Khumbula lokho izindawo okufanele uzibuke kakhulu yizindlebe, amakhwapha noma iminwe nemilenze kanjalo nomsila.
Gwema izindawo ezinokhula olunzima noma izitshalo ezinde
Kuyiqiniso ukuthi asazi neze ukuthi sizozithola kuphi lezi zinambuzane. Kepha singagwema ezinye izindawo eziyinkimbinkimbi nokuthi zizokhululeka kuphi, njenge izindawo ezinzima kakhulu. Akufani nokuhamba kulezi zindawo kunokuhamba endaweni enotshani obuningi. Yize njengoba sisho, asikwazi njalo ukuzigwema nge-100%.
Njengoba sishilo, ukususa imikhaza enjeni akuyona into elula ngaso sonke isikhathi, kepha kufanele sikwenze ngokushesha okukhulu. Ngoba kungale ndlela kuphela lapho sizobavimba ukuthi bangondli egazini lakho nasekudluliseni izifo ezingaba zimbi kakhulu ezimweni ezithile. Kuvame kakhulu ukuzitholela bobabili entwasahlobo nasehlobo ngenxa yamazinga okushisa. Ngaphezu kwalokho, banezigaba ezi-4 kumjikelezo wabo wempilo, baze babe imikhaza yabantu abadala, ngakho-ke bangadala izinkinga esikhathini esifushane nesikhathi eside.
Ngakho-ke, kungcono ukuhlola inja yethu nsuku zonke, ikakhulukazi uma kade ingaphandle. Ukuxubha kahle nokulawula izindawo ezisemqoka zomzimba wakho njengezindlebe noma izinyawo kubalulekile. Isebenzisa njalo ngodlawana lokususa imikhaza ungalokothi ngezandla zakho. Noma kunjalo, kufanele uzivikele ngamagilavu ​​ukuze ugweme ukulunywa. Kufanele ngaso sonke isikhathi sigxile ekususeni ikhanda lakhe, ngoba yilo elingadala wonke umonakalo esiwukhulumile. Uma usususiwe, ungawulahli, ngoba aqinile kunendlela ocabanga ngayo. Into enhle ukuyifaka esitsheni esinotshwala bese siyivale kahle, size siqinisekise ukuthi ifile. Manje sesiyazi ukuthi ungasusa kanjani imikhaza enjeni nokuthi ungazivikela kanjani!
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izifo » Ungayisusa kanjani imikhaza enjeni